आफ्नै नामको इमेल पाउनुभा छैन? आउटलुक साइनअप गर्नुस् , Hamro Bhaktapur "A Complete information about Bhaktapur and its People"
आफ्नै नामको इमेल पाउनुभा छैन? आउटलुक साइनअप गर्नुस् - Nagarik News Aug 2, 2012
काठमाडौँ- जीमेल, याहू आदि निःशुल्क इमेल सेवामा आफूले खोजेकै जस्तो युजरनेमसहितको इमेल ठेगाना पाउन गाह्रो छ। यो समस्या समाधान हुनसक्छ, यदि तपाईँले झट्टै आउटलुक डट कममा साइन अप गरिहाले।तर छिटो गर्नुस्, किनभने मंगलबार माइक्रोसफ्टले यो सेवा सुरु भएको घोषणा गरेको ६ घण्टामै १० लाख भन्दा बढीले साइन अप गरिसके।हटमेल डट कम ठेगाना भएका प्रयोगकर्ताले आफ्नै युजरनेमबाट आउटलुक डट कमको नयाँ इमेल ठेगाना बनाउन सक्छन्। नयाँ इमेल सेवा आउटलुक डट कमले पछि स्काइपबाट कुरा गर्न मिल्ने बनाउने तयारी छ। गुगलले पनि अहिले गुगल टकबाट यस्तो सेवा दिइरहेको छ। माइक्रोसफ्टले गत वर्ष साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलरमा स्काइप किनेको थियो। निःशुल्क इमेलमा अहिले गुगलको जीमेल नै अगाडि छ। यसका प्रयोगकर्ता साढे ४२ करोड छन्। हटमेलसित भने पछिल्लो पटक गन्दा ३५ करोड प्रयोगकर्ता थिए। -एजेन्सीको सहयोगमाSource : Nagarik News